सार्वजनिक बसमा घर जाने यात्रुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज ३, २०७६ शुक्रबार १०:३१:५७ | सिताराम हाछेथु
दशैँ मुखैमा आइसक्यो । अब काठमाण्डौ छोडेर आफ्नो घर जाने यात्रुको घुइँचो बढ्छ । दशैँमा घर जाने यात्रुहरुले धेरै कुरा थाहा नपाएकै कारण यात्रा झञ्झटिलो हुने गर्छ ।
ट्राफिक महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार २०७५ सालको कुरा गर्ने हो भने २२ लाख मान्छेले दशैँमा काठमाण्डौ छाडेको तथ्याङ्क छ । यसमा सानो लापर्वाही र ध्यान नदिएकोले दुर्घटना भएको कुरा हामीलाई थाहा छ । घर जाने बेलामा मात्रै होइन न घर जानुअघि देखि नै तयारी सुरु गर्नुपर्छ ।
यो वर्ष असोज ५ गतेदेखि टिकट बुकिङ सुरु हुने भएको छ । अब जो–जो घर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफूले जाने ठाँउको टिकट काउन्टर कहाँ छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ । रातभर कुरेर टिकट काटेको भन्ने कुराहरु हामीले देखेका र सुनेका छाैँ । यस्तो दुःख नपाउन पहिले कहाँ कहाँ टिकट काउन्टर छन् त्यो सबै बुझ्नुपर्छ । आफ्नो टिकट पाउने ठाँउमा सकेसम्म भिड नहुँदै गएर टिकट काट्नुपर्छ ।
धेरै यात्रुहरु फूलपातीको बेलामा जाने तयारीमा रहेको हामीले पाएका छौँ । यसले गर्दा यो बेला गाडीको पनि, यात्रुको पनि चाप बढी हुने, टिकट नपाउने, कोचाकोच गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो नहुन यात्रुले सकेसम्म फूलपातीभन्दा पहिला वा पछाडि अलि कम चाप भएको बेला जाने हो भने यात्रा धेरै सहज हुन्छ ।
यात्रुले आफू जाने बसको बारेमा बुझ्नुपर्‍यो । हामीलाई दशैँमा घर जानुपर्ने हुन्छ र हामी केही नबुझी टिकट काट्छौँ । हामी जाने गाडी कस्तो छ ? पुरानो छ कि नयाँ छ ? त्यो गाडी कन्डिसनमा छ कि छैन ? हामीलाई केही थाहा हुन्न । त्यसैले यात्रुले गाडीको बारेमा बुझ्नुपर्छ । पहिलो त्यो गाडीको नम्बर थाहा पाउनुपर्छ ।
ट्राफिकको आँखा छलेर धेरै यात्रुहरु गाडीको छतमा बसेर पनि जाने गरेका हुन्छन् । यो निकै खतरापूर्ण हुन्छ । हामीले यसका लागि जाँच गर्दा ट्राफिक र प्रहरीलाई देख्दा ओर्लिने अनि त्यहाँबाट अघि बढेपछि, ट्राफिक नदेखेपछि फेरि छतमा चढेर जाने गरेको छन् । यसो गर्दा एकछिन ढाँटेर के गर्नु यसबाट यात्रु आफै असुरक्षित हुने भएकोले यसो नगर्न हामी सबै ट्राफिक प्रहरी अनुरोध गर्छाैँ ।
हामीले सधैँ कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ । गाडीको झ्यालबाट टाउको ननिकालौँ भनेर तर पनि धेरैले यसो गर्नुहुन्छ । त्यसो गर्दा बाहिर अझै रोडमा त एकदमै खतरा हुन्छ । जस्तै बान्ता आउने भयो भने झोलाको प्रयोग गर्न सकिन्छ नि बाहिर टाउको निकाल्नु परेन नि ।